किन “भर्जिन” श्रीमतीको खोजिमा भौतारिन्छन् पुरुषहरु ? – sagunkhabar.com
किन “भर्जिन” श्रीमतीको खोजिमा भौतारिन्छन् पुरुषहरु ?
एजेन्सी-जुनै पनि समाजमा विवाहको छुट्टै महत्व रहेको छ। हाम्रो नेपाली समाजमा पनि विवाहलाई मानव जीवनको एक अभिन्न अङ्गको रुपमा लिने गरिन्छ। नेपाली समाजमा एक महिला-पुरुष बीचको सम्बन्धलाई वैधानिकता दिने विवाहले गर्छ। नेपाली समाज केही परम्पर्त्मक देश रहेको क्कारण हाम्रो देशमा केही बेकारको मान्यता समेत रहेको बताउने गरिन्छ। नेपाली समाजमा अहिले जस्तो सुकै युवकले पनि कुमारी युवती मात्रै विवाह गर्ने चाहना राख्ने गर्छ।
कुनै समयमा यस किसिमको मानसिकतालाई खासै नराम्रो मानिने गर्दैनथ्यो। तर अहिले आधुनिकता बढेसँगै कुमारीत्व भँग भएको युवती र कुमारीत्व भँग भएको युवती भनेर छुट्याउनुलाईनै मुर्खताको संज्ञा दिने गरिएको छ। जतिनै आधुनिकता नेपालमा बढेको भएता पनि युवाहरुमा कुमारीत्वलाई लिएर खासै परिवर्तन भने आइसकेको छैन।
कुमारीत्व बेकारको अवधारणा
अझै पनि नेपाली एस्समाजमा आफ्नो श्रीमती उमेरमा ठुलो हुन नहुने पनि मान्यता राख्ने थुप्रै व्यक्तिहरु पाइने गरिन्छ। युवतीको कुमारीत्वलाई गहनाको रुपमा लिने धेरै युवकहरुमा धेरै गलत धारणा रहने गर्छ। सुखी साथै खुशी जीवन यापन गर्नको लागि श्रीमान-श्रीमती बीच समझदारी साथै राम्रो सम्बन्ध रहनु धेरै अपरिहार्य रहने गर्छ। तर यहि कुमारीत्वसँग जोडिएर सोच्ने युवाहरुको जतिनै आधुनिक भए पनि सोच बदलिएको देखिदैन।
कुमारीत्वको अवधारणाको कुनै पनि ठोस परिभाषा नरहने धेरैले बताउने गर्छन्। यस कारण पनि युवतीको कुमारीत्व प्रति प्रश्न उठाउने पुरुषलाई अहिले मूर्खको संज्ञा पनि दिन थालिएको छ। केही महिला अधिकारकर्मीहरु पुरुषहरुको चाहिँ कुमारीत्वको अवधारणा के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न समेत उठाउने गर्छन्। समयसँगै कुमारीत्वको परिभाषा परिमार्जित मात्रै भएर नहुने साथै यस बेकारको अवधारणा समाजबाट साथै दिमागबाट हटाउनु पर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
जब मिथुनको प्रेममा पागल थिइन् श्रीदेवी: तब आफ्नै पतिलाई बाँधीदिएकी थिइन् “राखी”